कतै तपाईलाई क्यान्सर त भएको छैन? थाह पाउनुहोस्, यस्ता छन् १० लक्षणहरु ! — SuchanaKendra.Com
कतै तपाईलाई क्यान्सर त भएको छैन? थाह पाउनुहोस्, यस्ता छन् १० लक्षणहरु !
यी १० लक्षण देखिए क्यान्सरले छोड्दैन । र क्यान्सरले ज्यान लिन्छ । तर क्यान्सरको शुरुवाती कालमा चाल पाइयो भने आफूलाई बचाउँन सकिन्छ । तर सामान्यतः अधिकाँश मानिसले यस्ता शुरुवाती लक्षणलाई वेवास्ता गर्ने गर्छन् । विज्ञहरुका अनुसार क्यान्सरको शुरुवातीकालमा निम्न लक्षण देखिन्छन्
दिशा वा पिसावमा रगत देखिनु खतरनाक हो । खासगरी दिशामा रगत देखियो भने यसले तपाइँको ठूलो आन्द्राको अन्तिम भाग वा गुदद्वारमा क्यान्सर भएको हुन सक्ने संकेत दिन्छ । पिसावमा रगत देखियो भने चाँहि प्रोष्टेट क्यान्सरको लक्षण पनि हुन सक्छ । ओएस नेपालबाट